Warbixin: Ciidamada dhowaan gaaray Magaalada Kismaayo // Xaalada Magaalada | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Ciidamada dhowaan gaaray Magaalada Kismaayo // Xaalada Magaalada
Muqdisho (KON) Maamulka dowladda Soomaaliya ee Gobalka Gedo ayaa faah-faahin ka bixiyay ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya oo dhawaan gaaray Magaalada Kismaayo ee Gobalka Jubadda hoose.
Guddoomiyaha Gobalka Gedo ee Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Kaliil oo uwaramay laanta afka Soomaaliga ee Voa-da ayaa sheegay in ciidanka gaaray Kismaayo ay ka ambabaxeen Gobalka Gedo Dowladda Soomaaliyana ay dirtay ciidankaasi.
Wuxuu sheegay in ciidankaasi iminka ay ku sugan yihiin Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose, isaga oo tilmaamay inay ka howlgalayan Magaalada Kismaayo.
Ciidankaan oo ka ambabaxay Degmada Ceelwaaq ee Gobalka Gedo ayaa waxa uu sheegay inay sii mareen xadka Soomaaliya iyo Kenya kadibna ay halkaasi ka galeen Kismaayo.
Ujeedka Ciidankaan ayaa wuxuu sheegay inay tahay ka qeybqaadashada xaaladaha dhanka ammaanka ee Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose Kismaayo inkastoo ammaankeeda uu yahay mid wanaagsan ayaa hadana waxaa jira xiisad ka taagan magaalada oo udhaxeysa ciidanka dhawaan gaaray Magaalada Kismaayo iyo kuwa Raaskaambooni.
Maleeshiyaad Beeleedka Raaskambooni oo iyaguna soo bixitaanka Ciidamadas ka hadlay ayaa sheegay in Ciidamadaasu ay yihiin kuwa dooonaya in falal amni darro ay ka abuuraan Magaalada Kismaayo isla markaana aysan jirin wax ay kala soo socdaan imaatinkooda Gobolkaas.
Xaalada Magaalada ayaa aad u kacsan kadib markii ay Maleeshiyaadka Raaskambooni ay kasoo horjeesteen Ciidamda Dowlada.
Keydmedia Online oo la hadashay Sarkaal aan rabin in Magaciisa la adeegsado ayaa yiri "Khaska ay Ciidamda Axmed Madoobe wadaan ma ahan mid loo dulqaadan karo, Magaaladii ay ka dhigteen "Shay" ay ayagu leeyihiin"
Sarkaalka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri "Dowlada waa inay Tilaabo ka qaadaa Tuugtaan, wax kale oo lagu tilmaami karo ma jiree"